Nirefodrefotra mandra-marain’ny andro ny basy: jiolahy telo maty voatifitry ny zandary, 5 azo sambo-belona | NewsMada
Tambajotran-jiolahy, voalaza fa nampihoron-koditra ny mponina amin’ny kaominina mpifanolo-bodirindrina, ao anatin’ny distrikan’i Toamasina II ity nifampitana tamin’ny zandary, ny alin’ny alakamisy hifoha omaly zoma ity. Maty voatifitra tamin’izany ny telo, raha azo sambo-belona kosa ny dimy hafa.
Nirefodrefotra ny basy, ny talata alina lasa teo, hatramin’ny alarobia 14 aogositra 2019 maraina tao amin’ny kaominina mifanolo-bodirindrina, manomboka teo Ivoloina mihazo ny kaominina ambanivohitr’Ambodimandresy sy Sandahatra, Ampasimbe ary Ambodinjirofo sy Basindrano samy ao anatin’ny distrikan’i Toamasina II. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, tambajotran-jiolahy misa valo avy any Fenoarivo Atsinanana sy avy ao Toamasina malaza ratsy amin’ny fanafihana mitam-piadiana ao amin’ny distrikan’i Toamasina II ireto nifanehatra tamin’ny zandary ireto. Fantatra fa nandritra ny roa andro no nifanenjika tamin’ireto jiolahy ireto ny zandary. Isaky ny tanàna lalovan’ireo jiolahy ireo dia manapoaka basy ry zalahy sady mampitahotra ny fokonolona tsy hihetsika. Tokantranona mpandraharaha iray tao amin’ny kaominina Sandahatra no nidiran’ireo jiolahy an-keriny, saingy namaly tifitra ilay mpandraharaha ary tsy nanaiky ny fampihorohoroana nataon’ireo jiolahy azy. Notifirin’ireo jiolahy anefa ity raim-pianakaviana ity ka namoy ny ainy avy hatrany, ny alarobia maraina teo ary norobain-dry zalahy avokoa ny entam-barotra rehetra tao an-trano. Nahazo antso avy amin’ireo fokonolona ny zandarimariam-pirenena ka nametraka ny sakana tamin’iny distrikan’i Toamasina II iny ka tamin’izany no nahazoan’izy ireo loharanom-baovao fa misy lehilahy iray mampiahiahy mihazo an’Antsiranambe ho any Basindrano.
Tratra teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy…
Napetraka ny vela-pandrika ka voasambotra Rakotoniaina Jhonny, 32 taona avy any Sahavola Fenoarivo Atsinanana. Nogejaina avy hatrany ny telefaonina findainy ka niainga teo ny famotorana sy ny vela-pandrika ireo namany. Vokany, tratra teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy mihazo an’i Fenoarivo Atsinanana i Kika Gidore 28 taona avy any Mangarivotra Fenoarivo Atsinanana. Hitan’ny zandary tao anaty telefaonina findain’izy roa lahy ny mombamomba ireo namany ka teo no nahafahan’ny zandary nanao ny vela-pandrika ka nahafahana nandrava ireto andian-jiolahy ireto. Nisy tamin’izy ireo aza no mbola niafina tany anaty ala, araka ny fanazavan’ny zandary hatrany. Nitohy tao anaty ala ny fifanjevoana teo amin’ireo jiolahy sy ny zandary, ny alin’ny alakamisy hifoha zoma. Vokany, maty voatifitry ny zandary ny telo tamin’ireo jiolahy. Azo sambo-belona kosa i Serge, 35 taona avy ao Ampasimpotsy Fenoarivo Atsinanana, i Jean de Dieu Félicien, 32 taona avy ao Ambomozinga Sandahatra Fenoarivo Atsinanana zanatany, i Toto François 24 taona avy ao Toamasina (olona iray mpanome vaovao ireo jiolahy ny iray amin’izy ireo). Tafaporitsaka ary mbola karohina kosa ny lehilahy iray mpividy halatra.
Evaluation du Gouvernement : le chef de l’Etat affiche sa fermeté 21/01/2020
Manomboka milamina ny tanàna 21/01/2020
Tafaporitsaka ny namany efa-dahy: jiolahy mpamaky trano iray matin’ny fitsaram-bahoaka 21/01/2020
Les indésirables du 21 Janvier 2020 21/01/2020